Home Wararka DEG DEG:Qarax Gaari oo Ka dhacay meel aan ka fogeyn Koontarool laga...
DEG DEG:Qarax Gaari oo Ka dhacay meel aan ka fogeyn Koontarool laga galo Madaxtooyada Soomaaliya
War Goordhow soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in qarax gaari uu ka dhacay meel aan ka fogeyn Isgoyska siinaay ee degmada Warta-Nabada ee Gobolkan Banaadir.
Qaraxaan ayaa dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegeen in uu ahaa mid Gaari nooca raaxada ah loogu xiray qof watay,isla markaana xilli uu marayay agagaarka Xarunta Dahabshiil uu qarxay.
Darawalkii gaariga ayaa la sheegay in uu dhaawac soo agaray kaas oo mid ka mid ah Isbitaalada Muqdisho loola cararay.
Khasaaro ayaa la sheegayaa in uu jiro,waxana Goobta gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo hakiyey isku-socodka dadka iyo gaadiidka.
Wixii ku soo kordha kala socda halkan
Previous articleRw ku xiigeyn hore ahna Xildhibaan Qaran oo Farmaajo iyo Khayre Eedeyn kulul ujeediyay
Next articleDEG DEG:Madaafiic iyo Rasaas Laga Maqlayo Degaanka Tukaraq&Madaxweynaha Somaliland oo ku sii wajahan halka..
Qeylo dhaan ka soo yeertay shacabka kulana taliyay in aanu ka...
Ururka Al Shabaab oo la wareegay Deegaanka Goofgaduud Buureey